ပထမဆုံး ပိုးတွေ့လူနာ ၂ဦးရဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာကို WHO ရဲ့ ရည်ညွှန်းဓာတ်ခွဲခန်းကို ဒီကနေ့ ထပ်မံပေးပို့ စစ်ဆေးမယ် အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
ပထမဆုံး ပိုးတွေ့လူနာ ၂ဦးရဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာကို WHO ရဲ...
24 มี.ค. 2563 - 07:38 น.
(၁ မြန်မာနိုင်ငံက ပထမဆုံး ပိုးတွေ့လူနာ ၂ဦးရဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာကို WHO ရဲ့ ရည်ညွှန်းဓာတ်ခွဲခန်းကို ဒီကနေ့ ထပ်မံပေးပို့ စစ်ဆေးမယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုဗစ် -၁၉ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု ပိုးတွေ့လူနာ ၂ဦးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကို မတ် ၂၃ ရက်ညပိုင်းမှာ ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါ ၂ဦးရဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် (WHO)ရဲ့ ရည်ညွှန်းဓာတ်ခွဲခန်းကို မတ် ၂၄ ရက်နေ့မှာ ထပ်မံပေးပို့ပြီးအတည်ပြုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ပိုးတွေ့လူနာ ၂ဦးမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို မတ်လ၁၃ ရက်နေ့က လေကြောင်းခရီး နဲ့ဝင်လာတဲ့ ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့က မြန်မာနိုင်ငံသား အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Green Card ရရှိထားသူ အသက် (၃၆) နှစ်အရွယ် အမျိုးသား နဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံက မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ လေကြောင်းခရီးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အသက် (၂၆) နှစ်အရွယ် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသားတို့ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။
သူတို့ ၂ဦးကို အမျိုးသားကျန်းမာရေး ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) သို့ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဓာတ်ခွဲ အဖြေ အရ အခုလို အတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ဝေဘာဂီနဲ့ တီးတိန်ဆေးရုံတို့ မှာသီးသန့်ခွဲထား တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးမှာလက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်လျှက်ရှိပြီး တီးတိန်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ကုသမှု ခံယူလျက်ရှိသော အမေရိကန်ပြန် လူနာ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာလည်း ကိုယ်ပူဖျားနာခြင်း နဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများမရှိပဲ သက်သာလျက် ရှိသလို အင်္ဂလန်မှ ပြန်ရောက်လာသော Facility Quarantine ထားရှိသော လူနာမှာလည်း မတ် ၂၃ ရက်ညအထိ မည်သည့်လက္ခဏာမှ မတွေ့ရ သေးကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။
(၂ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (အေအေ)ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ မတရားအသင်းအဖြစ်ကြေညာ
ရက္ခိုင့်တပ်တော် (အေအေ)ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့မတရားအသင်းအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အမိန့် ကြေညာချက်ကို အစိုးရအဖွဲ့က မတ် ၂၃ ရက်ညပိုင်းမှာ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတဆင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ကြေညာချက်ထဲမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတက အေအေအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ အများပြည်သူရဲ့အေးချမ်းသာယာရေးစတာတွေကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေ မတရားဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ အရ အေအေအဖွဲ့ကို မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ အေအေတို့အကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည် သိန်းနဲ့ချီရှိနေပြီး နေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေကြား ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရပ်သားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝမြို့အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့နယ်၁၀ ခုကို အင်တာနက်ကွန်ရက်တွေလည်းဖြတ်တောက်ထားပြီး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
အစုအပြုံလိုက်တိုးဝှေ့ဝယ်ယူတာတွေကြောင့် ၂၄နာရီ စူပါမားကတ်အချို့ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရ
(၃ လူစုလူဝေးနဲ့ ဈေးလုဝယ်တာတွေကြောင့် စူပါမားကတ်အချို့၊အစုအပြုံအလိုက်တိုးဝှေ့တာကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှုပိုမိုပျံ့နှံ့နိုင်လို့ သတိပေး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု ပိုးတွေ့လူနာ ၂ဦးရှိလာပြီလို့ မတ် ၂၃ ရက်ညပိုင်း ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက် ညတွင်းချင်းမှာပဲ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ စူပါမားကတ် နဲ့ ၂၄ နာရီ မီနီမားကတ်အချို့မှာ လူအစုအပြုံလိုက် စားသောက်ကုန်များကို တိုးဝှေ့ဝယ်ယူခဲ့တာကြောင့် စူပါမားကတ်အချို့ ပစ္စည်းပြတ်ပြီး ယာယီပိတ်ထားရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို အစုအပြုံလိုက် တိုးဝှေ့ဝယ်ယူတာဟာ အလွန်အန္တရာယ်များပြီး အခုလို စူပါမားကတ်တွေမှာ အစုအပြုံလိုက်တိုးဝှေ့ဝယ်ယူမှုကြောင့် ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မြင့်တက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေ ရှိတာကြောင့် သတိထားဆင်ခြင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ ဦးဇော်ဌေးက သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကတဆင့် အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ပိုးတွေ့လူနာပထမဆုံးအနေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက် လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ကန့်သတ်ချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း အသိပေးထားပါ တယ်။
အတည်ပြုလူနာမတွေ့ရှိမီကပင် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို မလိုအပ်ပါက အပြင်မထွက်ဘဲ အိမ်မှာပဲနေကြဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိပေးပန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ် ၁၉- အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်အပါအဝင် နိုင်ငံတချို့ကို ပြည်ဝင်ခွင့် မြန်မာ ထပ်မံကန့်သတ်
(၄ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးတွေ့လူနာရှိလာတဲ့အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင် တက္ကသိုလ်အချို့ ဖြေလက်စစာမေးပွဲများ ရပ်ဆိုင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုဗစ် -၁၉ ပိုးတွေ့လူနာ ၂ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ မတ် ၂၃ ရက်ညပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မှော်ဘီ) ၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း နည်းတက္ကသိုလ်အပါအဝင် တက္ကသိုလ်အများစုက ဖြေလက်စပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲတွေကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တက္ကသိုလ်အသီးသီးက ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲတွေကို မတ် ၁၈ ရက်ကနေ မတ် ၂၅ ရက်နေ့ထိ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး အခုဖြေဆိုပြီး ဘာသာရပ်တွေကို ပြန်လည်ဖြေဆိုစရာမလိုဘဲ သင့်တော်တဲ့ကာလမှာ ပြန်လည်ကျင်းပမယ့် ဘာသာရပ် ၂ခုကိုသာ ပြန်လည်ဖြေဆိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒ့ါအပြင် အခုလက်ရှိ ကျင်းပနေတဲ့ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေကို ကိုဗစ် -၁၉ ကြောင့် ဖြေဆိုလိုခြင်းမရှိဘဲ တောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေမှာ တစ်ဘာသာမှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခြင်းမရှိဘဲ အစားထိုးစာမေးပွဲများ ပြန်လည်ကျင်းပပေးမယ်လို့ တက္ကသိုလ်အသီးသီးက ကြေညာချက်ထုတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၁၆၄၉၆ ဦး ရှိလာ
(၅ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၆၀၀၀ ကျော်ရှိလာ
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် WHOကလည်း ကိုဗစ် - ၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဟာ ဆက်အရှိန်မြှင့် နေဦးမယ်လို့ ပြောထားသလို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးနီးပါးကို ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၁၆၀၀၀ ကျော်ထဲမှာ အီတလီနိုင်ငံက သေဆုံးမှုပေါင်း၆၀၇၇ ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ပထမဆုံး ပိုးတွေ့လူနာ ၂ဦးရဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာကို WHO ရဲ့ ရည်ညွှန်းဓာတ်ခွဲခန်းကို ဒီကနေ့ ထပ်မံပေးပို့ စစ်ဆေးမယ် အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ